Your generous contribution and unwavering support are very much appreciated. May all devotees and well-wishers rejoice and share in these merits accrued from this Dhamma-dana. May these merits of our donors beagood pre-condition for the attainment of Nibbana.
If you wish to offer alms for breakfast (7am to 7.30am) or lunch (11am to 11.30am), please kindly contact to us.
Incoming events organized by Siri Mangala Society .... 2016
သီရိမင်္ဂလာ မြန်မာသီလရှင်ကျောင်းဧ။် (၁၁) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ကို ကျင်းပမည်ဖြစ် ပါ၍အသင်းဝင်များကို ခင်မင်ရင်းနှီ စွာ ဖြင့် ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။
နေရက် ။ ။ ၅-၆-၂၀၁၆
အချိန် ။ ။ နေ့လည် ၁နာရီ
နေရာ ။ ။ 6A Beatty Road #03-03 Wu De Building (near Farrer Park MRT Exit G)
ပိုင်းလော့ဆရာတော် (၅)ရက်တရားစခန်း၊ ဒုလ္လဘရဟန်းခံပွဲနှင့် သီလရှင်ဝတ်ပွဲ
သီရိမင်္ဂလာ မြန်မာသီလရှင်ကျောင်းမှ စီစဉ်ကျင်းပသော တရားစခန်းကို ၀၅-၁၁-၂၀၁၆ နေ့မှ ၀၉-၁၁-၂၀၁၆ နေ့ထိ ပိုင်းလော့ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတမှ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါ၍ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ရန် နှိုးဆော် အပ် ပါသည်။
နေ့ရက်။ (၀၅.၁၁.၂၀၁၆) နေ့မှ (၀၉.၁၁.၂၀၁၆)နေ့ထိ
အချိန်။ ။စနေ နေ့ နံနက် မနက် (၈) နာရီ
(သောကြာ နေ့ ညနေ ၅ နာရီ မှစ၍ ညအိပ်ယောဂီ များ လာရောက် နိုင်ပါသည်။)
နေရာ။ ။ Orion Building, 160 Paya Lebar Road, Singapore 409022
ဆရာတော် လေယာဉ် လက်မှတ်၊ တရားဟောခန်းမဆောင် တစ်နေ့တာ၊ နေ့ဆွမ်း၊ ရေသန့်၊ အဖျော်ရည်များ နှင့် အထွေထွေကုန်ကျ စရိတ်များအတွက် ကုသိုလ်ပါဝင် လှူဒါန်း နိုင်ကြပါပြီ။ အလှူရှင် စာရင်းကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှုပြီး သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါသည်။
အာရုံ ဆွမ်း အလှူ (တရက် စာ) -
နေ့ ဆွမ်းအလှူ (တရက် စာ) -
တရားဟောခန်းမဆောင်(တရက် စာ) -
ယောဂီဆောင်(တရက် စာ) -
6A Beatty Road #03-03 Wu De Building (near Farrer Park MRT Exit G).
Ph: 62963549, 91393307